अमेजन स्पेनका कर्मचारीहरूले हड्ताल बोलाए ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | अमेजन, सामान्य, हाम्रो बारेमा
स्पेन मा पहिलो अमेजन केन्द्र को कुल 825 कर्मचारीहरु (सैन फर्नान्डो डे हेनारेस, म्याड्रिडमा) उनीहरूले हडताल गरे। बिहीबार एउटा साधारण सभा बोलाइएको थियो र शुक्रवारको बिहानमा यस हडतालको आह्वान आधिकारिक रूपमा घोषणा गरियो। कारण अघि गरिएको निर्णय हो अमेजनको सामूहिक सम्झौताको नवीकरण गर्न अस्वीकार.
साथै, कम्पनीले प्लान्ट मजदुरहरूको कामका सर्तहरू कम गर्ने प्रस्ताव मुख्य कारणहरू भएको छ। कुल, कार्यबलका 74।% कामदारहरूले यस भोटमा भाग लिएका छन्ती मध्ये तीन क्वाटरले हडतालको पक्षमा मतदान गरे।
मिति स्थापना गर्न कम्पनी कमिटीले मजदुरहरुको भोट पछि भेला भएको छ जुन त्यो हडताल हुनेछ। यद्यपि यस समयमा कुनै विशेष मिति यसको लागि प्रकट गरिएको छैन। तर हामी लाग्छ यो छिट्टै हुनेछ।
टेम्पलेट तर्क गर्दछ कि यो हडताल भयो किनभने अमेजनले श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छकम्पनीको कामका सर्तहरु लाई कम गर्न को लागी पहिले नै उल्लेख गरिएको मनसायको अतिरिक्त। वास्तविकता यो हो कि यो एक समस्या हो जुन टाढाबाट आउँदछ सम्झौता डिसेम्बर ,१, २०१ on मा समाप्त भयो। त्यो मिति देखि एक नयाँ एक कुराकानी गरिएको छ। यद्यपि यी वार्ताहरू बिना सफल भएको छ।
युनियन नेताहरूले टिप्पणी गरे कि अमेजनले केन्द्रको सर्तलाई सम्मान गर्ने वचन दिए नयाँ सम्झौतामा। तर, सम्झौता सुरु भएको जुन घडीमा कम्पनीले जनाएको छ कि केन्द्रका वर्तमान कामदारहरूको काम गर्ने स्थिति कम हुँदैछ। र, यो देखिन्छ कि मुख्य कटौती कर्मचारी तलब प्रभावित हुनेछ। मुख्य हुनु भनेको उच्च कोटीहरूका विशेषज्ञहरू प्रभावित हुन। यो पनि कम्पनीले रुचि छ कि उल्लेख गरिएको छ ओभरटाइम को मूल्य कम.
त्यहाँ द्वन्द जस्तो देखिन्छ अर्को पक्ष जुन कम्पनीले बिरामी बिदाको स्थितिमा सुरक्षा कम गर्न चाहन्छ। हाल कामदारहरूले पहिलो छुट्टीमा १००% तलब पाउँछन् चौथो दिनदेखि र बाँकीमा। अमेजनले सुरक्षालाई to०% मा कम गर्न चाहन्छ.
स्पष्ट रूपमा कम्पनीले कर्मचारीहरूसँग वार्ता गरेको छ, तर उनीहरूले अपेक्षित प्रभाव पाएका छैनन्। युनियन नेताहरुका अनुसार यसले धेरै मजदुरहरुलाई यस हडतालमा सम्मिलित हुन उत्साहित गरेको छ। अमेजनले यी आरोपहरूको बिरूद्ध आफैंको पक्ष लिएको छ र टिप्पणी गरेको छ कि उनीहरू कामदारहरूसँग वार्ता गर्न जारी राख्नेछन्.
यो हड्ताल कहिले बोलाइन्छ भनेर थाहा छैन। नत्र यदि आउँदो दिनमा दुबै पक्ष बीच सम्झौतामा पुग्न प्रयास गर्न नयाँ वार्ता हुने छ। कम्पनी को लागी यो एक ठूलो समस्या हुन सक्छ किनकि यो स्पेनमा सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो। तसर्थ, तिनीहरूको गतिविधि हडताल अवधिमा गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ। आउँदो दिनमा के हुन्छ हामी ध्यान दिनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » 825२ Amazon अमेजन स्पेनका कर्मचारीहरूले नयाँ सम्झौताको बारेमा हडताल गरे
डेभिड कासियो काल्भो ओलिभरेस भन्यो
सोली! तर उनीहरूले भने कि त्यो कम्पनीमा काम गर्नु रमाईलो थियो र सबै खुशी थिए?
डेभिड कासियो काल्भो ओलिभरेसलाई जवाफ दिनुहोस्